We.com.mm - ပြတ်သွားတဲ့ ex ကိုမေ့ပစ်လို့ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅) ချက်…။
ပြတ်သွားတဲ့ ex ကိုမေ့ပစ်လို့ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၅) ချက်…။
သင့်မှာ အခုချိန်ထိမေ့လို့မရနေတဲ့ ex ရှိနေသေးသလား…။ ကိုယ့်ကိုမချစ်တော့လို့ထားသွားတဲ့ ex ကိုမေ့လို့မရဖြစ်နေတာလား…။ ကိုယ်တစ်ကယ်ချစ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူက ကိုယ်ကိုမချစ်တော့ပဲ ပစ်သွားတာကို စိတ်ညစ်ခံပြီး သူ့ကိုလွမ်းနေမယ့်အစား မေ့ပစ်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ…။ ဒါပေမယ့် မေ့ပစ်ဖို့ဆိုတာက ပါးစပ်ကနေပြောနေလို့သာ လွယ်တာပါ…။ တကယ်တမ်း မေ့ပစ်ရမယ့်အချိန်မှာတော့ အရမ်းကိုခက်ခဲနေတာကို ကြုံတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီတော့ ပြတ်သွားတဲ့ ex ကိုမေ့ပစ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။
၁. ပတ်သက်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကို ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပါ…။
အရင်က ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ အမှတ်တရတွေကုန်လုံးကို မေ့လိုက်ပါ…။ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ Photo တွေ၊ Tag ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အကုန်လုံးကို ဖြတ်လိုက်ပါ…။ ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးကိုလည်း ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ…။ သူနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကို မေ့ပြစ်ပြီး စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး နေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ သင့်ကိုမေ့သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၂. စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးပြေပျောက်အောင် နေထိုင်ပါ…။
စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါမှာ ဘယ်နည်းလမ်းက သင့်ကိုစိတ်အပန်းပြေစေတယ်ဆိုတာကို သင်သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ…။ TV ကြည့်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာမျိုးတွေကလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေကို ပျောက်ကင်းစေတဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သင့်အနေနဲ့လုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်…။ နောက်တစ်ခုကတော့ မိန်းကလေးတိုင်းက အလှအပနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြားအကြောင်းအရာတွေကို မေ့နေတတ်တာကြောင့် သင့်စိတ်ညစ်မှုတွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ…။ ဆံပင်ပုံစံတွေပြောင်းပစ်တာ၊ အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Skin Care တွေလုပ်တာမျိုးတွေအပြင် တစ်ခြားအလှအပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကို လုပ်ကိုင်တာကလည်း သင့်စိတ်ကို သက်သာစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
၃. အိပ်ယာထဲမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့…
အိပ်စက်အနားယူခြင်းကလည်း စိတ်ညစ်စရာတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်…။ သင့်မှာ ဘာမှလုပ်စရာမရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဒီတိုင်းနေနေရင်တော့ တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ စိတ်ရှုပ်စရာတွေက ခေါင်းထဲကိုဝင်လာနိုင်ပါတယ်…။ ဒီလိုအချိန်တွေမရှိတော့အောင် ဘာမှလုပ်စရာမရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်လိုက်၊ စားချင်တာတွေစားလိုက်၊ အိပ်လိုက်နဲ့လုပ်နေတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ…။
ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကတစ်ယောက်ထဲသမားပြန်ဖြစ်သွားတာကြောင့် ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ လွတ်လပ်စွာပတ်သတ်လို့ရပါတယ်…။ ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုလာကြိုက်နေတဲ့သူတွေနဲ့ လွတ်လပ်စွာပတ်သက်ခွင့်ရှိပြီး ကိုယ့်အပေါ်ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တဲ့သူအပေါ် လွမ်းဆွေးနေမယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပျော်ပျော်နေလိုက်တာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ…။
၅. ပျော်ရွင်စရာ အစီစဉ်တွေကို ရေးဆွဲလိုက်ပါ…။
သင့်မှာ စိတ်ညစ်မှုတွေ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အစီစဉ်တွေရှိနေမှလည်း ဖြစ်မှာပေါ့…။ ဒါကြောင့် အလုပ်တွေအားတဲ့ရက်တွေဆိုရင် ကလပ်တွေ ဘားတွေ၊ Festival ပွဲတွေသွားဖို့စီစဉ်တာမျိုးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူစီစဉ်ပါ…။ စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်ပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အစီစဉ်တွေကို ရေးဆွဲလိုက်ပါ…။
အချစ်ရေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဆိုတဲ့အရာကြောင့် ဝဋ်ကြွေးတစ်ခုလိုမျိုးခံစားနေရပြီလား…
Selena တစ်ယောက် သူမရဲ့ Childhood Crush နဲ့ပြန်တွဲနေပြီလား ?
သူ့အချစ်ကိုရဖို့ ထိုင်စောင့်နေမယ့်အစား ဒီလိုကြိုးစားပါ…
တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်ကြည့်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါ့မလား
2 years ago by Scarlett
ချစ်သူသက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုအဆင်ပြေလာအောင် ဘာတွေလုပ်ရမလဲ
ကွယ်လွန်သူမိခင်ရဲ့ ပုံကို ပုံကြီးချဲ့ပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်အထိ ယူလာခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ရကျောင်းသားလေး
သင့်Crush က သင့်ကိုပြန် Crush နေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများ
မထော်မနန်းတွေလုပ်မိလို့ Mobile Legends ကစားခွင့် နှစ် ( ၃၀ ) အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေး
ကိုဗစ်ပိုး ထင်ထားတာထက်ပိုသန်မာ၊ နာနိုအပ်တောင် မတိုး
11 days ago by WaiLin
အမြင်မရိုင်းပဲ ဖက်ရှင်ကျတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အနုပညာရှင် (၃) ဦး
ရှမ်းပြည်ဘက်က မြေကြီး စားလို့ကောင်းတယ်